Sida loo hagaajiyo shaashadda pc-ga ayaa aad u weyn? - LifeBytes | LifeBytes
Sida loo hagaajiyo shaashadda pc-ga ayaa aad u weyn? Tani waa su'aal aad loo codsado. Laakiin asal ahaan waa dhibaato xalka shaashadda, marka astaamaha iyo daaqadaha ku jira pc u muuqdaan kuwo aad u weyn oo ka weyn cabbirka Kormeerka waxaa suurtogal ah in la yareeyo oo lagu meeleeyo cabbirkooda caadiga ah.
Xallinta dhibaatadani waa mid aad u fudud, kaliya beddel xalka shaashadda, waxaan dhihi karnaa sidan oo kale: qiimaha qaraarka shaashadda ayaa si isle'eg ugu dhigma baaxadda sawirrada Kormeerka, taas oo ah, si kale haddii loo dhigo, qiimaha sare ee xallinta pantalla sawirada yaryar ayaa eegi doona. Sida loo beddelo waxay ku xirnaan doontaa Nidaamka hawlgalka la isticmaalayo.
1 Tallaabooyinka la raaco si loo habeeyo xallinta shaashadda gudaha Windows 7
1.1 Waxaad kaloo beddeli kartaa cabbirka astaamaha desktop -ka
2 Habraaca Mac
Tallaabooyinka la raaco si loo habeeyo xallinta shaashadda gudaha Windows 7
Ku riix badhanka midig meesha aan daboolnayn ee desktop -ka pc -ga. Dooro "Guryaha".
Tag daabacaadda "Dejinta", ku cadaadi bayaanka "Muuji guryaha".
Ku wareeji koontaroolka bayaanka "xallinta shaashadda" dhinaca midig. Sidii aan horeba u sheegnay, xallinta sare, baaxadda astaamaha ayaa yaraan doonta.
Riix «aplicar»Markaad dooranayso dejinta qaraarka cusub.
Waxaad haysataa ikhtiyaar inaad ku aragto shaashadda. Waxaad ku xaqiijin kartaa aqbalaaddaada adigoo riixaya "Haa" sanduuq yar oo ku qoran "Kormeeraha dejinta”Ka dibna riix "Inaad aqbasho". Hawlgalkan waxaa la samayn karaa inta jeer ee aad rabto.
Waxaad kaloo beddeli kartaa cabbirka astaamaha desktop -ka
Waa inaad gelisaa miiska kombiyuutarkaaga.
Waxaad doorataa "Arag" oo dooro cabbirka astaanta ee doorbidkaaga
Kombuyuutarka Mac xallinta shaashadda ayaa nidaamisa xaddiga macluumaadka ee isla waqtigaas lagu soo bandhigi karo kormeeraha. Isla mabda'a wuxuu u shaqeeyaa sida ku jirta pc maxay adeegsadaan Windows xallinta sare, walxaha yaryar ayaa ka muuqda pantalla iyo saamaynta ka soo horjeedda ayaa la soo saari doonaa marka la dalbanayo dhimista qiimaha la sheegay.
Dabcan, waxay ku xirnaan doontaa cidda adeegsata kumbuyuutarWaa arrin la doorbidayo, oo leh cillado muuqaal ayaa doorbidaya inay la shaqeeyaan walxo waaweyn ujeeddooyinka qaabab muuqaal oo yar sidaa darteedna waxay awood u yeelan karaan inay si fiican u sawiraan. Horyaalka Talyaaniga Mac OS leeyahay kontaroolada xalinta la dhisay si xallinta shaashadda si dhakhso leh loo hagaajiyo.
Habka kombiyuutarada Mac waa sida soo socota, talaabo talaabo:
Dooro astaanta Apple oo ku taal bidixda kore ee shaashadda.
Guji bayaanka "Doorbidyada nidaamka", kadibna dooro "Shaashadaha".
Guji bayaanka "Shaashad" haddii aan weli la dooran.
Dooro mid xalinta kuwaas oo ku jira liiska qaraarada liiska qaraarada qalab. Waan ognahay in xallinta shaashadda ee inta badan la isticmaalo ay tahay 1280 x 1024 ee bandhigyada caadiga ah iyo 1280 x 800 loo diray screens nooca panoramic. Kombiyuutarada Mac OS X qaabeynta cusub ayaa isla markiiba shaqaysa.
Wadada buuxda ee maqaalka: LifeBytes » Shabakadaha » Sidee loo hagaajiyaa shaashadda kombiyuutarkaygu aad buu u weyn yahay?
Sida loo hagaajiyo taleefanka gacanta ee qoyan
Eeg dhammaan wixii ku saabsan Freedompop gudaha Mexico